Xilka iyo Adeegyada Rugta - Somaliland Chamber of Commerce, Industry and Agriculture(Somalia)
Xilka iyo Adeegyada Rugta
Posted on: September 27th, 2012	by admin	49 Comments
Rugta Ganacsiga, Warshadaha iyo Beeraha Somaliland waxay had iyo goor u heellan tahay u adeegidda.
Ujeedooyinka loo dhisay Rugta waxay yihiin kuwa hoos ku cad:
Wakiil ka noqoshada Ganasatadda kala duwan, Wershadleyda, Beeraleyda iyo Kalluumeysatadda iyadoo danahooda ilaalineysa, kana shaqeynaysa horumarinta hawlgaladooda.
U dhaxaynta Dawladda iyo Hantileyda gaar ahaaneed iyo u kala gudbinta labada dhinac talooyinka iyo wada tashiga arrimaha khuseeya horumarinta dhaqaalaha dalka iyo sameynta shuruucda cusub ee saameeya dhaqaalaha.
U horseedida horumarinta dhaqaalaha dalka, iyadoo dhiiri-gelinaysa wax-soo-saarka kordhinaaya wax-dhoofinta.
Raadinta suuqyada dibeda ee ku wanaagsan wax-dhoofinta iyo kuwa kale ee laga keeni karo badeecooyinka tayada fiican, qiimahooduna hooseeyo.
Ururinta, isku duba ridka iyo faafinta Wararka, Qoraalada iyo Waraaqaha rasmiga ah ee saameeya Ganacsiga, Wershaddaha, Beeraha, Xoolaha iyo Kalluumeysiga.
La socodka dhaqdhaqaaqa Ganacsi ee gudaha iyo dibada.
Qaban-qaabinta Carwooyinka gudaha iyo ka qayb-galka kuwa dibedda ee caalamiga ah.
Samaynta tababaro gudaha iyo raadinta kuwo dibedda ah oo ganacsatada iyo shaqaalaha Rugtuba ka faa’iidaystaan.
U kuur galka dhibaatooyinka ka hor imanaaya dhaqaalaha dalka iyo tallo ka soo jeedinta sidii looga hortegi lahaa, iyadoo la kaashanaysa Guddiyo ka kooban aqoonyahanno ku xeel dheer arrimahaa.
Magacaabida ka qaybgalayaasha Shirarka iyo Seminaarada Caalamiga ah ee khuseeya hawsha Rugta.
Taakuleynta hantileyda gaar ahaaneed, sidii ay uga heli lahaayeen maalgelin Hay’addaha Gudaha iyo Dibeddaba.
Abaabulka Xidhiidh iyo Iskaashi ay la yeelanayso Rugaha iyo Ururada Carbeed, Goboleed, iyo Caalamiga ahba.
Dhiiri-gelinta hawl kasta oo horumarineysa Dhaqaalaha Dalka.
Ka qayb-qaadashada dibudhiska Dhaqaalaha Dalka iyo Nolosha Bulshada..
Adeegga Guud ee Rugta
Rugtu waxay samaysaa adeegyada hoos ku cad:;
Samayta Shahaado Asal ah ee la raacsho alaabooyinka dalka laga dhoofsho oo dhan.
Xaqiijinta Warqadaha rasmiga ah iyo Saxeexyada Xubnaha Rugta
Rumeynta Qaansheegyada Ganacsi
dhexdhexaadinta marka laga codsado, muranka saameeya ganacsiga ee ka dhex dhaca ganacsatada gudaha amaba kuwa gudaha iyo ganacsatada dibedda.
[...] Here you can find 83459 more Info on that Topic: somalilandchamber.com/som/?p=184 [...]…
how much does reputation management cost says:
[...] Information on that Topic: somalilandchamber.com/som/?p=184 [...]…
[...] Read More on to that Topic: somalilandchamber.com/som/?p=184 [...]…
infirmiere a domicile says:
[...] Read More here to that Topic: somalilandchamber.com/som/?p=184 [...]…
carrcrete microcement says:
[...] Here you will find 91693 more Info on that Topic: somalilandchamber.com/som/?p=184 [...]…
[...] Read More Info here to that Topic: somalilandchamber.com/som/?p=184 [...]…
[...] Find More to that Topic: somalilandchamber.com/som/?p=184 [...]…
[...] Info to that Topic: somalilandchamber.com/som/?p=184 [...]…
Anabolika Tabletten Kaufen Online in Deutschland, Österreich says:
[...] There you will find 19842 more Information to that Topic: somalilandchamber.com/som/?p=184 [...]…
[...] Find More Info here to that Topic: somalilandchamber.com/som/?p=184 [...]…
[...] Read More on that Topic: somalilandchamber.com/som/?p=184 [...]…
[...] Read More on on that Topic: somalilandchamber.com/som/?p=184 [...]…
[...] Find More on that Topic: somalilandchamber.com/som/?p=184 [...]…
[...] There you can find 46406 more Info to that Topic: somalilandchamber.com/som/?p=184 [...]…
[...] Here you will find 54593 additional Info to that Topic: somalilandchamber.com/som/?p=184 [...]…
[...] Find More Information here on that Topic: somalilandchamber.com/som/?p=184 [...]…
[...] Read More to that Topic: somalilandchamber.com/som/?p=184 [...]…
SEO expert and local website promotion says:
[...] Read More here on that Topic: somalilandchamber.com/som/?p=184 [...]…
web site design uk says:
[...] Find More Information here to that Topic: somalilandchamber.com/som/?p=184 [...]…
infirmier a domicile says:
Microblading in Westchester NY says:
[...] There you will find 49530 additional Information on that Topic: somalilandchamber.com/som/?p=184 [...]…
[...] Here you can find 56033 more Info on that Topic: somalilandchamber.com/som/?p=184 [...]…
[...] Read More Info here on that Topic: somalilandchamber.com/som/?p=184 [...]…
sell my house fast shreveport says:
[...] Here you can find 17456 more Information to that Topic: somalilandchamber.com/som/?p=184 [...]…
Matratzenschutz online says:
[...] Find More Info here on that Topic: somalilandchamber.com/som/?p=184 [...]…
see this now says:
[...] Find More here on that Topic: somalilandchamber.com/som/?p=184 [...]…
avatar creative says:
studio city bathroom remodeling says:
[...] There you will find 1258 additional Info to that Topic: somalilandchamber.com/som/?p=184 [...]…
Attentive Dental Care says:
[...] Information to that Topic: somalilandchamber.com/som/?p=184 [...]…
[...] Here you will find 23726 additional Info to that Topic: somalilandchamber.com/som/?p=184 [...]…
[...] There you can find 71280 additional Info to that Topic: somalilandchamber.com/som/?p=184 [...]…
biaya aborsi jakarta says:
[...] There you will find 57949 more Information on that Topic: somalilandchamber.com/som/?p=184 [...]…